Eid al - Adha wax kasta oo la xiriira
موضوع: Eid al - Adha wax kasta oo la xiriira الجمعة سبتمبر 01, 2017 8:02 pm
Ciidul Adxa ku dhacaa 10 Dhu al-Hijjah, halkaas oo dunida Muslimka waxaa dabaal Munaasabaddan dhulka oo dhan u taliya, iyo egyahay 13 Dhu al-Hijjah, halkaasoo dhamaadka xajka dhaqanka isaga ka hor hal maalin, maalmaha ugu dambeeya waa in Xajka, halkaas oo sarajooggeeduna wuxuu of cibaadaysi, kuwaas oo 9 Dhu al-Hijjah, taas oo Duuliyayaashu waxay fuulayaan Mount Arafat.
dunida Muslimka Faihtvl in midnimo la this booskaas taagan, maalintii ugu horraysay ee dad sodcaal ah Eid kuwaas oo halkaas ku jira "Mona" allabaryo bixiya in wejigii Ilaah. Iyo iyaga oo leh dhammaan Muslimiinta awoodda leh ee dhammaan qaybaha dhulka. Laga soo bilaabo halkan ahaa magacaabista oo fasax this Ciidul Adxa, iyo in allabaryo weyn ee la gowracay oo u bixiyey tirada allabari waxaa la odhan jiray Ibraahim, oo ku saabsan inuu wiilkiisii ​​dilo Ismaaciil oo ka jawaabeysa codsiga Ilaah furtay Ismaaciil Bkpc ku allabaryi jireen, waayo, wejigii Ilaah waa kan ka dib.
dabaal Ciidul Adxa bilaabaan inay oogaan salaadda Ciidul waagii beryayay maalintii ugu horraysay ee iidda, kaas oo ku dhammaada afar maalmood. Salaadan waa in lagu sameeyaa jihad ka baxsan masaajidka, waana la ogol yahay masaajidada. Sidoo kale ka dib qaab ciyaareed tukashada fidaa Muslimiinta si ay u fuliyaan codsiga Odhyatem qalayo ee aayadda Quraanku: "waxaan idin siiyey Kawthar, kala Eebihiin oo allabari ugu bixinaynaa"
Muslimiinta loo isticmaalaa in midba midka kale salaama sida ugu dhaqsaha badan ay ku dhameysan salaadda Ciidda halkaas oo Muslim kasta waa la isgacan Muslim leh "Ilaah annaga iyo idinka aqbalo," iyo "sanad kasta oo aad tahay wanaagsan." Waxay booqdeen oo taageerayeen qaraabadooda. Jubair bin Nafir wuxuu yiri:miingon: